Alatsinainy, Aogositra 23, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Matt Chandler
Iray amin'ireo antony halako Facebook dia ny iraka apetrany amin'ny fametrahana ny zava-drehetra amin'ny toerana iray. Mifanohitra amin'izany, izany koa no antony itiavako azy.
Miaraka amin'ny serivisy marobe izay mikasa ny hisarika ny saintsika, sy ireo toeram-pivarotana an-tserasera maro hifehy, ny taonan'ny fampiasana rindrambaiko iray hahatratrarana tanjona manokana dia maty toa an'i Dillinger. Amin'ny maha mpivarotra antsika dia antenaina hitarika ny doka Facebook izahay, hikaroka karama, SEO, Twitter, bilaogy, hevitra, resaka… mitohy ny lisitra.
Nahavita ny volana izahay ary niverina imbetsaka tamin'ny sambon-danitra miaraka amin'ny herin'ny computing ambany noho ny calculator am-paosy. 40 taona aty aoriana dia tsy misy fialan-tsiny amin'ny tsy fahaizany manara-maso, mandanjalanja ary mandrefy ny atiny an-tserasera avy amin'ny loharanom-baovao marobe. Mila manao zavatra bebe kokoa ny orinasa fa tsy mandray anjara: mila mahafantatra tsara ny fomba fandraisan'ny fandraisana andraikitra an-tserasera tsirairay hatrany izy ireo.
Tsy ampy ny mivarotra mpanjifa fotsiny mandoa isaky ny kitiho doka sy fampidirana bilaogy, Facebook ary Twitter tsy tapaka. Tsy maintsy manangona angon-drakitra isika, mandrefy ny fitaomana sy ny fahatsapana ary manombatombana ny fahombiazany.
Soa ihany fa misy tsara rindrambaiko ho serivisy Fampiharana (SAAS) manararaotra APIs mba hamoronana dashboard – foibe fitantanana sy fanaraha-maso feno – ho an'ny media an-tserasera. Ny sasany manana fetra voafetra, ny hafa kosa mahazo anao ny zava-drehetra ary milentika ao an-dakozia. Ny sasany tsy mitaky fahaizana teknika tena izy, ny sasany kosa mila traikefa matotra Analytics. Ny zavatra ilainao sy ny tanjonao ary ny loharano anananao hanananao ny olana no resahina rehetra.
Ny iraisan'ny rehetra dia ny fanehoan'izy ireo topy maso ny làlan'ny Internet, ary mamela anao sy ny ekipanao hamaly mifanaraka amin'izany. Ny ankamaroan'izy ireo dia manara-maso angona ara-tantara mitovy amin'ny a Malagasy Analytics fonosana. Mihoatra noho ny fandaharam-potoana amin'ny paik'ady tokana izy ireo, fitaovana feno izy ireo amin'ny fanaraha-maso, fandraisana andraikitra ary famakafakana na eo amin'ny biraonao, na amin'ny Internet, na amin'ny finday.
Lisitr'ireo ohatra fohy:
Aza manao hadisoana: ny orinasa lehibe indrindra, mahomby indrindra amin'izao fotoana izao amin'ny lalao interactive dia mampiasa ireto fitaovana ireto. Rehefa miha tsara sy manampy tolotra misimisy kokoa ireo fitaovana fampiasa amin'ny dashboard, dia toa toa an'i NASA ihany ireo sampana mifampiresaka. Fa izy ireo dia mitovy ihany koa fampitoviana, manome ny fomba fijery mitovy amin'ny marika lehibe sy kely, ary mamela azy ireo hanamarina ny teti-bolan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampisehoana isa mivaingana izay mandeha.
Tags: changianalterian sm2buzzlogichifaninanarindrambaiko marinMozMediaWikiradian6fiaraha-moninatrackur
Manintona ny mpanaraka, aza mividy azy ireo
Aug 24, 2010 amin'ny 7: 44 AM
Ity dia lisitry ny loharano lehibe. Tsara ny mahita isa mifanohitra amin'ny resadresaka an-tserasera tsara manohana ny paikadinao amin'ny haino aman-jery sosialy ary tena manao izany ireo fitaovana ireo.
Aug 24, 2010 amin'ny 9: 59 AM
Azo antoka indrindra. Rehefa miova ny fifandraisana amin'ny zava-baovao na porofon'ny foto-kevitra ho lasa tsipika fivarotana mahazatra, resaka fandrefesana daholo izany.